अक्षर हिंड्ने बाटो ...: यत्रा
अक्षर हिंड्ने बाटो ...
जहाँ-जहाँ पुग्छु, त्यहीं-त्यहीं पुग्छ ।
कामुक रात समुन्द्रमा पौडिरहेको छ । चर्को अंग्रेजी संगीत हृदयको कुनामा बिउँजन्छ । काँचको सिसा नाघेर बाहिर आईपुग्छ रात्री क्लबको कामुक दृष्य ।
डिस्कोमा हल्लिरहेको मन अबाक बनेर थन्किन्छ एउटा कुनामा । किनारामा समुन्द्रको पिद छामेर उभिएको छ बिजुलीको रंगिन चमक ।
लाग्छ हातैले उघाउँ समुन्द्र । थामौ आकास । उडौँ पखेटा लगाएर । टिपौँ रंगीन चमक । फैलाउँ बतासमा सुवास ।
के गरौँ ? कसो गरौँ ?
पटैयाको समुन्द्र किनारामा पल्टँे बालुवामा । हेरेँ आकास तिर । आबुई ! चन्द्रमा त समुन्द्र हेरेर टोलाई पो राखेको छ ।
सायद लोभिदो हो चन्द्रमा, यो रंगिन जीबन, समुन्द्रको उत्तेजित छाल, स्वतन्त्र जीवनको लय देखेर ।
हाम्रो फिरन्ते टिमले सुवर्णभूमी एअरपोटमा पैतला टेकेपछि थाईल्यण्डलाई टिप्यौँ आ—अफ्नो आँखाको लयमा । टिममा छौँ नविन, चुडा,किरण र म । हामी बीच फरक—फरक रुची छ तर घुमफिरको शैली एकै छ ।
हामीलाई बोकेको कारले बिसायो आफ्नो बाटो बैँककको छातिमा । हामी फैलियौँ बैँककको फराकिला सडक देखि साँगुरा गल्लिसम्म । उभियौँ ठूला सपिगंमहल देखी फुटपाते पसलसम्म । यहाँका फुटपाते पसलले हमीलाई रत्नपार्कको झजल्को पैँचो दियो ।
ठेलामा मोटरसाईकल जोडेर बनाईएको ठेले रेष्टुरेन्टमा थाईफुडको आन्नद लिदै गरेका टुरिष्टको कोलाजले घेरेको छ साँझको बैंकक । हामी पनि कोलाजमा थपियौँ ।
हामी बसेको होटलको नबौँ तलामा छ निलो पौडि पोखरी । जसको किनारामाछन् पेन्टिगं चित्रजसता सुन्दरीहरु । जो हम्मेसा मुस्कानको पसल थापेर बाँचछन् । मध्य राति पौडिएँ आकासे पोखरीमा । पोखरीको एक किनारामा छन् एकजोडि गोरा यात्री जो मेरो सिकारु स्वीमिगं देखेर हाँस्दैछन् ।
पोखरीबाट बाहिर निस्कँे र तिनार्कै छेउमा बसेर पिउँदै भनेँ ‘मलाई राम्ररी पौडन त आउँदैन तर आकासे पोखरीको अनुभब लिऊ भनेर हामफालेको हूँ ।’
एकैछिन् पछि एउटी थाई सुन्दरी आएर मसाजसेन्टरको मेनु हातमा थमाएर गई ।
रातै भरी अनेक ठाउँमा अनेक ब्राण्डका मदिरा चाख्दै रमाईलो गर्यौँ । पिउँदा पिउँदै बिहानको घामले गिलाशमै पैतला टेक्यो । टाउको त गिदी नै फुत्केला जसरी दुखन थाल्यो । सायद टाउको भित्र रक्सीका अनेक ब्राण्डहरु युद्ध गर्दाहुन् र भन्दाहुन् तँ भन्दा म ठूलो, यो पियकडले तँलाई भन्दा मलाई बडि मन्परायो । वा भन्दा हुन् यो भुक्त भोगीको जिब्रोमा मेरो स्वदको राज छ ।
भोलिपल्ट बिहान दश बजे निस्क्यौँ गोल्डेन बुद्ध टेम्पल । कतै कतै साँगुरा बाटामा ट्राफिक जाम छ । जसले आखाँमा कठमाडौँ उभ्याई दियो । हुन त हामी जहाँ गए पनि देश नविर्सने देशभक्त परेम् ।
हाम्रा गाइडले थाईल्यण्डको बारेमा औसत जानकारी गराए । भौगोलिक बनोट देखि राजनितिक प्रणाली, बिकास देखि धर्मसम्म । लगतै बज्यो हामी चडेको गाडिमा रेसम फिरिरि ...................
यो बिशाल बुद्ध गोल्डेन टेम्पल भित्र बुद्ध लमतन्न सुतेकाछन् । सुनौला बुद्ध एकदम शान्त मुद्रामाछन् । यो भिमकाय बुद्धको ज्यान खाइलाग्दो छ । बाहिर पुराना प्राचिन स्तुपाहरु निलो आकास हेरेर टोलाई उभिएकाछन् । अलि ओर्तिर गुम्बामा केही बुद्ध ध्यानीहरु ध्यानमग्नछन् । मैले लुम्बिनि सम्झे, जहाँ अलिक पहिले थाईबुद्ध बिहारमा केही घण्टा बिताएको थिएँ ।
बुद्ध गोल्डेन टेम्पलबाट फर्के पछि हामी एउटा हिरा र सुनको बिसाल सोरुम भित्र छिरेयाँै । जहाँको दैलोमा जन्मजात सुन्दर मुस्कान बोकेर उभिएका उही पेन्टिगं चित्र जस्ता सुन्दरीहरुले स्वागत गरे । हामी चारै जनाको पछि एक÷एक जना सेल्स गर्ल पछि लागे । सन्चो बिसन्चो सोधे ।
मेरो पछि लाग्ने सुन्दरीले हाम्रो देशलाई निक्कै प्रसंसा गरि । हिमालका कुरा गरि । पसुपतिनाथ, स्वयंबु, टुडिखेल, बसन्तपुर, कृष्ण मन्दिर अरु अरु मैले नजानेका कुरा पनि उसले जानेकी झै गरि ।
‘तिमीलाई नेपालको बारेमा धेरै जानकारी रहेछ । कसरी यति धेरै थाहा पायौ ?’
‘मलाई नेपालको बारेमा रुची छ त्यसकाराण जानकारी लिएकी हूँ । बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन नि । म बुद्धिस्ट हूँ ।’
यो वर्षको अन्तमा नेपाल घुम्न जाँदै छु समेत भनिभ्याई ।
मोरीले अन्तमा निक्कै राम्रो हिराको औँठी देखउँदै मलाई सौधी– ‘तिमीले बिहे गरेको छौँ ?’
–‘ओहो ! तिमीले यति राम्रो औँठी श्रीमतीलाई उपहार लान पाएनौ । म दुखी छु । ठिक्कै छ । तिम्रो कोही मनपर्ने मान्छे होलान् लगेर यो उसैलाई उपहार दैऊ ।’
जसरी पनि उसले मलाई कैही न केही किनाउने नै भई । मैले एउटा औँठी आफ्नै लागि किनेँ ।
हामी सबैजना बाहिर निस्के पछि निक्कै बेर हास्यौँ । हामी सबैलाई मैलाई जसरी केही न केही किन्न बाध्य बनाईएको रहेछ । पछि थाहा भयो प्रत्यक भिजिटरको पछि सम्बन्दित देशको बारेमा जानकारी भएका सेल्सगर्ल पछि लगाईदो रहेछ ।
दिउसो सफारी पार्क जाने भयौँ । यो बिसाल पार्कमा छुट्टै संसार भेटिन्छ । अनेक मनोरञ्जनका खेल देखि थ्रिडी नाटक, डल्फिन सो रंगिन चराहरुको संसार सबै किसिमका जिब जन्तु ।
यो पार्क भित्र छिरे पछि आफुलाई निक्कै रमाईरहेको भेटिन्छ । कहिल्लै नदेखेका जनावरसँग आँखा जुदाउन पाईन्छ । अनेक चरहरुको संगीत चोरेर हृदयमा लुकाउन पाईन्छ । हिंस्रक जनावरलाई समेत नजिकैबाट आँखाले टिपेर हिँड्न सकिन्छ । यो पार्क जनावरहरुको रंगीन दुनियाँ हो ।
भोलिपल्ट बैकंकबाट जन्डै १६८ किलोमिटर पूर्व पटैया पुग्यौँ । हामी बसेको होटल मार्कल्याडको जुनसुकै कोठाबाट आँखा समुन्द्रसम्म पुग्थ्यो । उठ्दै गरेको समुन्द्री छाल, मोटरबोटको बेग, प्याराग्लाईडिगंबाट हावामा कावाखाईरहेका मान्छेहरुको अनुहारको चमक सजिलै देखिन्थ्यो ।
समुन्द्रको छाल हुत्तिएर अलिओर सम्म आईपुग्छ । मानौँ यो समुन्द्र आफ्नो घेराबाट बाहिर निस्कन चाहान्छ र यो कामुक सहरलाई एकपल्ट चुमेर फेरि फर्कन चाहान्छ ।
दिउँसो बटरफलाई गार्डेन तिर डुल्यौँ । पार्कका रंगिन फूलहरु र पुतलीहरुको बिचित्र संसार छ यहाँ । यति सुन्दर छ कि कुनै पनि शब्दले यहाँको सुन्दरता टिप्न सक्दैन । पुतलीहरु रंगबोकेर उड्छन् । प्रत्येक फुलका रंगहरुसँग मनले कहिल्यै नगरेको सम्बाद गर्छ ।
बटरफलाई गार्डेन एउटा उदुम आन्नद बोकेर शान्त सास फेर्दाे रहेछ । यहाँ हामीले प्रत्येक पाईलामा शान्ती अनुभुत गर्यौँ । मान्छेहरु छन् तर हल्ला छैन् । मानौँ प्रत्येक फूलले हल्ला सोसेर उपहारमा शान्ति दिईरहेछन् र भनिरहेछन् संसारमा फूलहरुको शान्ति अदभूत छ । मानौँ बुद्धले फुलको बगैँचामा थप शान्ति बोनस दिएर गएकाछन्
साँझ पटैयाबिच फर्केयौँ । यो बीच संसारकै सुन्दर बीच मध्ये एउटा हो । डिस्को, नाईटकलब, बार, रैष्टुरेन्टबाट निस्केको चर्को स्वरले हामीलाई पछ्याई रहेको छ । सेता सिसा भित्रका प्रत्येक अङग सडकले छाम्न सक्छ र आफुलाई कामुक बनाउँन सक्छ । सिँगो पटैया बिउँझेर उभिएको छ समुन्द्रको छातिमा । प्रत्येक मान्छे पटैयाको कामुक अङग छामेर सलबलाईरहेछन् सडकमा । हामीले पनि पटैयाको कामुक दृष्य आँखाले छाम्यौँ । सोकेसमा सजाईएका सुन्दरीहरुको मादक मुस्कानले लठिएकाछन् हामी जस्ता फिरन्ते । युवतीमा कसले धेरै ग्राहाक तान्ने भन्ने त होडनै चलेको जस्तो देखिन्छ । बाटो बाटोमा पाकेको छ सि फुड । हामीले मज्जैले लियौँ गंगटाको स्वाद ।
मध्यराती होटल फर्केर किरण र मैले फेरीे रुफटप रेष्टुरेन्टमा बसेर पियौँ । जहाँबाट पटैया एउटा रंगिन शिशाजस्तो देखिन्छ ।
‘बिहे पछि हनिमुन मनाउन म यहिँ ठाउमा आउँछु ।’– मैले भनेँ ।
–मुला बुद्धु पटैया जस्तो ठाउमा पनि श्रीमती लिएर आउँछस् । यहाँ त एक्लै आउने र सुस्तरी यहाँको तरंगमा मातेर फर्कने । कहिल्लै श्रीमतीले नदेखेका चौकहरु तिर भौतारिने र फर्कने –किरणले भन्यो ।
हाम्रो पुरुष गन्ध बतासमा मिसिएर समुन्द्र तिर लाग्यो ।
अघि देखि हराएका नविन र चुडा समुन्द्र किनारामा जुन साँक्षी राखेर बिटुलिएछन् ।
नविनले भन्यो –‘यो ठाऊँमा आएर के बिनाअनुभब फर्कनु ।’ दुनियाले भोगचलन गरेको यो रंगीन दुनियामा भाग लिएपछि उनिहरुको अनुहारमा पटैयाको उज्यालो दगुरि रहेको थियो ।
भोलिपल्ट बिहान लाग्याँै मोटर बोट चढेरे पानीको बाटो । एउटा बोटले अलि पर लगेर छाडिदियो तैरिरहेको एउटा शान्त डुंगा माथि । जाहाँबाट मान्छे प्याराग्लाईडिगं गरिरहेका थिए । मलाई पनि उडौँ लागेको थियो तर समुन्द्रको छाति देखेर हिम्मत आएन ।
त्यस पछि हामी फेरी एउटा हरियो मोटर बोट चडेर आर्को शान्त ढुगंगामा पुग्यौँ । मैले सानो झोला पनि बोकि राखेको थिएँ । मोटरबोटबाट उर्तेर डुंगामा चड्नेबेलामा झोला छुटेछ । जसमा हामी चारै जनाको पर्स थियो । अब भयो समस्या । गर्ने के ? आँखाले समुन्द्र पनि कालै देख्न थाल्यो । कोहीसँग छैन खल्तिमा पैसा । भाको सबै डलर त्यसैमा छ । तिर्न बाँकी छ होटलको केही बिल । भोलि फर्कनु छ बैँकक । उड्नु छ नेपाल । अब गर्नु के ?
दिमाग झन्झनाई राखेको बेला एउटा थाई ठिट्टी आएर भनि ‘तिमी यति सुन्दर ठाउँमा किन निरास ?’
ख्यै के भनौँ ? भनु हरायौ पर्स । छैन पैसा । तर,केही बोलिन मौन बसिरहेँ । हेरिरहेँ समुन्द्र । साथीहरुले गालि गरे । कराए । फेरी तिनै साथीहरुले सम्झाएँ ।
अब कुनै उपाए निकालेर फर्कनुपर्छ ।
के उपाए निकाल्नु ? होटलको बिल त तिर्न पर्यो उपाए निकालेर उम्कन ।
आकास पनि कालो भयो । आँखा अगाडिको हरियो टापु पनि उदास मुडमा उभिए झै लाग्यो ।
फेरि स्थिर डुंगाको एकछेउबाट एउटी अग्ली सुन्दरी आएर सोधि –‘तिमी समुन्द्रमा पौडन्छौ ? माछाहरु झै । पैतालिस मिनेट पानी मुनी बसेको २५०० भाट लाग्छ । हिँड यो अवसर तिमीले फेरि फेरी पाउँदैनौ ।’
म बोलिन फेरी पनि मौन बसेँ । त्यस पछि मेरो देशको नाम सोधी
मैले नेपाल भनँे ।
—‘त्योसो भए त तिमीले समुन्द्रको फेद तिर जानै पर्छ मलाई थाहा छ तिम्रो दैशमा समुन्द्र छैन ।’
‘हैन मलाई निक्कै डर लाग्छ ।’
साथीहरुको अनुहारबाट पनि उज्यालो हिँडिसकेको छ । कुन दशाले पर्स बोकेर समुन्द्रमा आईएछ । माहा फन्दामा परियौँ । अब भन्नु कसलाई ? त्यो हरियो बोट खोज्दै जाउँ कहापुग्यो पुग्यो पुग्यो ।
हामी तिरै आउँदै गरेको बोट चडेर हामी किनारसम्म फर्केने निर्णय गर्दैथियौँ ।
लगतै पछि पछि फेरी अर्को बोट पनि सँगै आयो । त्यो बोट हरियो थियो । हामीले बोट चिन्यो । बोट चालक नजिकै आयो र निक्कै सुन्दर मुस्कान सहित भन्यो ‘यहाँहरुको ब्याग बोटमा छुटेछ पुर्याउन आएको हूँ ।’
‘थ्यगंस गड । हृदय देखिकै धन्यबाद । हमी तपाँइलाई सधै सम्झि रहने छौँ ।’
फेरी अर्काे बौट चडेर अलि पर गयौँ ।
हामी समुन्द्र कहिलै नदेखेका मनुवा परेम् । सकुनजेल पौडिखेल्यौँ । टुपिस लगाएर बालुवामा लसपसार सुन्दरीहरुलाई छालले छुएर लजाउँदै फर्कन्थ्यो ।
राति एघार बजे एउटा आइ.टी सपिगंमहल छिर्दा पसलहरु बन्दहुने तरखरमा थिएँ । एउटा ल्यापटप र क्यमेरा खरिद गरेँ । ल्यपटपमा प्रोग्राम हाल्न होटलमै आईपुगे एक मृदुभाषी युवक । निकै मिजासिला रहेछन् आई.टि. युवक । तीनै युबकसँग फोन मागेर एक थाई युवतीसँग कुरा गर्न थाले नविन र चुडा । पछि थाहा भो ती मित्रहरु त हिजोकै युवतीसँग उहि कर्मको लगि लाईन पो मिलाउँदै रहेछन
नविन र चुडा मध्यरातमा फेरी हराए वाकिङ स्ट्रिटको रंगीन गल्लि तिर । बिहान चारबजे होटल फर्केका मित्रहरु यती अबेर उठेकी थाईल्याडको अर्काे असाध्य सुन्दर ठाउँ फ्लटिङ मार्केट घुम्न छुट्याईएको समय पुरै बिलाएर गयो हाम्रो रुटिगंबाट । हामी फर्केयौँ फ्लटिङ मार्केटलाई अर्काे यात्रामा भेट्ने बाचा सहित बैंकक ।
याङग्रीको टाउको र आँखाको गति
यो एउटा मुडको यात्रा हो । मुडिहरुमात्र यसरी हिंड्न सक्छन् ।
नेपाल मेडिकल कलेजमा मृगौलामा स्टोनको अपरेसनको पालो पर्खेर बसेके छु । डाक्टरले फेरि अर्काे हप्ता बोलायो । दवाइ दियो र पठायो । अझै अर्काे हप्ता हेरौँ भनेको छ ।
कवि बाबु त्रिपाठीलाई घुम्न जाउँ भनें ।
उनको फुर्सदै छैन ।
के गर्नु यो हप्ता ?
नचिलाउने ठाउँमा पनि चिलायो । टाउको भित्र गिदी चिलिायो । पैतालाको नसा चिलायो । डाडको मेरुदण्ड चिलायो । त्यसै शंकर लामिछाने भन्दैनन्— ‘फुर्सदमा जिउँ चिलाउँछ ।’
कसैलाइ नभनी बालाजु आँए । गाडि चडें र लागें एक्लै गोसाई कुण्ड ।
नुवाकोट पुगे पछि । माथि थाप्लोमा दरबार देखियो । गाडिबाट ओर्लें । आज यतै घुमौँला र भोलि रसुवा तिर लागुँला । एकलै डुले नुवाकोट । माथि दरबारसम्म हिंड्दै गए । फन्को मारें । एकपल्ट सम्झें राजाका पुर्खाहरुलाई । दरबार भन्दा अलि माथि पुगेको थिएँ । एक टुक्रा हाड भेटें । यो पक्कै पृथ्वी नारायण साहाको हुनु पर्छ । हाड ओल्टाइ पल्टाई गर्दै थिँए माथिबाट भुक्तै कुकुर आयो र मलाई झम्ट्यो । सायद यो उसको भाग हुनु पर्छ । हातमा उठाइराखेको हाड फालिदिए । कुकुरले लग्यो । अब पृथ्वीनारायणको हाडमा मेरो अधिकार छैन । यसै गरि लगे होलान अंग्रेजले उसबेला मेरो देशको आधा सिमाना ।
भोलि पल्ट बिहान रसुवा लाग्ने सुर गर्दै थिए । कसैले रसुवा बन्दको सूचना हावामा छरेर गयो । लु आज बन्द । काठमाडौँबाट आएका बसहरु फर्के । बससँगै म पनि फर्कें, जुन बाटो आएँ थिए त्यहि बाटो ।
फर्कदा फर्कदै सम्झें बिनायोजना घुम्ने साथीहरुको नाम ठेगाना । अब एक जना कुनै साथी भेटे, जाने छु हेलम्बु यात्रामा । नभन्दै आर.के.अदिप्त गिरी जाने भए, मसँग । उनी देशको फोटो खिच्छन् र देश चिनाउँदै हिंड्छन् —ब्रमान्डको कुना कुना । उनी दुर देशसम्म आफ्नो फोटाहरु पुर्याउँछन् ।
आजकाल उनको परिचय कवि, गजलकार भन्दा उपल्लो बिन्दुमा पनि छ —फोटो ग्राफर ।
सुन्दरी जलबाट यात्रा चिसापानी पुगेर अडियो । चिसापानीको अनुहार हामी पुग्दा नपुग्दै अध्यारोले खोसि लग्यो । स्थानियहरु आगोको रापमा गीत गाउँदैछन् । गीतमा मिसिदैछन् हामी जस्ता फिरन्तेहरु ।
हामी बसेकै होटलमा अष्ट्रेलियन किशोरीहरुको एक झुण्ड छ । भोलि बिहान यिनीहरु समात्नेछन् उदाउँदै गरेको घाम । र, ओठको रेखामा कुदाउनेछन् खुसिको मुस्कान् ।
‘भोलि बिहान कति बजे घाम उदाँउछ यहाँ ?’ एउटी सुन्दर किशोरीले सोधी
‘पाँच बजे ।’
‘हिउँदको मैना पाँच बजे !’ पत्याईन मोरीले ।
‘साडे छ बजे ।’ आर.के. बोल्यो ।
सासै नफेरी एक गिलास वियर सकि ।
मैले पिउन छाडें । आँखाले उसको अनुहार पियो । म मातें । मातन पिउँनै पर्ने रैनरछ । म आज, यो किसोरीलाइ देखेर उसै मातेको छु ।
‘कति राम्री मोरी । फक्रदै गरेको फूलको थुंगो जस्ती ।’—मैले भनें ।
‘हैन फूल भन्दा राम्री फूल औइलाउँछ । झर्छ ।’— आर.के. बोल्यो
‘यो पनि बूढी हुन्छे । मर्छे । त्यस कारण यो फूल जस्ति मात्र हो ।’— मैले भनें ।
भोलि पल्ट हामी उठ्नु अगाडिनै किसोरीहरु बारदलीमा स्ल्पिङ ब्याग ओडेर सनराइज कुरि रहेकाछन् । आकासको गर्व रातो भएर आयो । टकुरामा कुनै प्रिय कवि उभिए झै उभिने छ —घाम । र, मिसिने छ—अनुहारको खुसिमा ।
एक किसोरी चिच्याइ ‘हाउ ब्युटिफुल !’
‘तिमी यसबेला कसलाई सम्झन्छौ ?’—मैले सोधें ।
‘सिड्निको व्वाई फ्रेन्डलाई । आइ मिस माइ हार्ट । ’
कति काउकुति लाग्यो होला यो कलिलो घाममा व्वाइ फ्रेन्ड सम्झदा । मोरीको अनुहार घाम जस्तै रातो भयो ।
आर.के. क्यामेरामा घाम समातिरहेछ । हिमालको टाकुरा टाकुरामा खसेको रातो घाम । हरिया डाँडामा पोतिएको घामको रगं । बतासको कामुक स्पर्स । खैरिनीको अनुहार । पालै पालो समाति रहेछ —क्यामेरामा ।
‘तिमीले पहिलो पल्ट घाम उदाएको देखेकि हौ ?’
‘तिम्रो देशमा घाम उदाउँदैन ?’
अलि अग्लि मोटि, हाँसी । र, भनि —‘उदाउँदै घरेको घाम अग्ला घरहरुले छेकिदिन्छन् । यसरी पाहाडको कापबाट पृथ्वीमा खसेको घाम पहिलो पल्ट देखेके हूँ ।’
‘यो सुन्दर नेपालमा सधै घाम, यसै गरि उदाउँछ ।’
चिसापानी बाट हिंड्ने बेला हेलम्बुको बाटो सोध्यांै । हेल्मबु पुग्न पाँच दिन लाग्छ अब । हाम्रो हिंडाइको गति सुस्त छ सात दिन पनि लाग्न सक्छ ।
हिंड्दा हिंड्दै खुट्टाले लौरो टेक्न खोज्यो । बाटामा लौरो बेच्न बसेको बूढो मान्छेलाई सोधें —‘बा यो लौरोको कति ?’
‘बिसमा दिनु न । ’
‘हुँदैन । तिमीले ऐले नलगे । खैरे आउँछ । चालिसमा लैजान्छ ।’
लौ मलाइ त सुबिधा पो रैहिछ । तिस तिरें र लौरो किनें ।
बाटामा आर.के. फोटो खिच्छन् । कसैले क्यामेरामा अनुहार दिन्छन् । कसैले गालि गर्छन् । बिहान चिसापानी मुनि एउटाले कुटुँला झै गरेर झम्ट्यो । क्यामरा देखे भैँसी तर्सदो रहेछ । दाम्लो चुटाएर बेपत्ता उफ्रने ।
‘साले हरामीहरु मेरो भैँसी तस्र्याे भने एक लाख तिराउँछु । ’
खल्ति छाम्यौँ हजारका दुइ चार पत्ता छन् ।
हामी ओरालै ओरालो बेपत्ता दगु्यौँ ।
थाङमुनी भञ्ज्यङको ठाडो उकालोमा हामीले एक अर्कालाई सुनायौँ, आ—आफ्नो किशोर प्रेमका कथा । आधा उकालो आर.के.को प्रेमले कटायो आधा मेरो प्रेमले ।
हिउँदे कलिलो घाम चिपलिङको ठिक टाकुरामा उभिएको छ । त्यो डाँडाम एउटै मात्र सानो होटल रहेछ । दाल भातको —दुइसय । आधी घण्टा मोबाइल चार्ज गरें— एक सय । ए गाँठे ! पैसा कता राख्ने ।
त्यहि डाँडामा आइ पुगे पोखराका यम परियार, उनका एक साथी र स्वीजरल्यडकी मा्यानी । अबको हेलम्बु यात्र अज रमाइलो हुने भो । आजको बस ताकेर हिंडियो —गोल्फु भञ्झ्यङ ।
लाप्चाको टाकुरामुनी हिमाललाई अनुहार देखाएर फुलेको छ— एक बोट गुराँस । के बिनी जवानी चडेछ ? बेलान कुबेला फुलेको छ । सायद यसको बोटमा मौसमको विर्य समय अगाबै खस्यो र अबैद्यानिक गर्वधारण ग्यो । यो लेकमा पुसको पहिले हप्ता मस्त बैंसमा फुलेको गुँरास मा्यानीले शिरमा सिउरी र हिमाल तिर फर्केर मुसुक्क हाँसि । गोरो अनुहारमा, रातो गुँरास, त्यो बुढी पनि सुन्दरी देख्खी ।
गुँरासले उसलाई बकायो— ‘नेपाल इज मस्ट ब्युटिफुल कन्ट्रि ।’
‘धन्यबाद मा्यानी ।’
तिमीले हिउँ देखेकी छौ, हिमाल देखेकी छैनौ । मैले हिमाल देखेको छु, हिउँदेखेको छुइन । म तराइको रैथाने । हिउँ भेट्न यसरी दगुरेको छु, जसरी तिमी हिमाल हेर्न दगुरेकी छौ ।
आजको साँझ गोल्फु भञ्झ्यङ सोचे जस्तै भयो । औधी चिसो रहेछ । बतास थेगिनसक्नु गतिमा दौडदो रहेछ । सामुन्ने आँखामा हिमाल छ । सायद त्यहि हिमालबाट बतास यता बेगमा ओर्लदै छ ।
कुखुराको भालेको मुल्य पच्चिस सय । कसले कुखुरा खाने ? पाँच जना छौ खसी नै आँट्यो तीन हजार÷ पैतिस सयमा सानो तिनो खसि भेटिदो रहेछ । मूल्य थाहा भयो । तर खसी बजारमा कतै पाइएन । साँझ प्यो गाउँ जान सकिएन । अन्ततः तीनटा भलेमै चित्त बुजाउन प्यो ।
मा्यानीले खासै मासु रुचाइन । तिनचार ओटा आलु खाइ र सुती । मलाई मर्छे भन्ने डर लाग्यो । दिन भरिको यत्रो हिंडाइ, राती आलुको भर । यमलाई सोधें —‘यो राती भोकले मर्दिन ?’
‘मर्दिन यसको आहारा नै यति हो । भोलि पनि यसै गरि हिंड्छे ।’
यमसँग मा्यानी पुरानो चिनजान रहेछ ।
मा्यानी, हाम्री आमा भन्न सुहाउने उमेर कि छे । यम र मा्यानीको प्रेम सम्बन्ध छ । मा्यानीलाई पटक पटक नेपाल तानि ल्यउँने एउटा शक्ति छ यससँगको प्रेम । यमलाई पनि मा्यानीको प्रेमले स्वीजरल्याडसम्म पु्याएको छ ।
भोलिपल्ट बिहानै हामीे गोल्फु भञ्झ्यङबाट उकालो लाग्यौँ । हिंड्नेबेलामा अलिक पाका जस्ता देखिने होटल साहूलाई सोधें ‘बा अचेल नेपाली टुरिस्टहरु कतिको हिंड्छन् यो बाटो ?’
बाले भने—‘हिंड्छन बाबु हिंड्छन नेपाली खैरैहरु पनि धेरै हिंड्न थालेकाछन् ।’
निकै माथि सम्म सम्झि सम्झि हाँस्यौ । साहेद मा्यानी पनि हाँस्थि होला तर उसलाई हामीले सुनाएनौँ ।
योजनामा आजको बास ठाडेपटि ( ३८०० मि.) रसुवाम हुने छ । तर, दिउँसै कुटुमसाङ बसिने भैयो । अब हिंड्न नसकिने अवस्था छौँ । मा्यानी पनि कुटुमसाङमा हिमालसँग जिस्कने मुडमा छे ।
कुटुमसाङबाट यांग्री हिमाल नजिकै देखियो । अहिले हिउँ परेको छैन । डाँडाहरु नङै छन् ।
‘लोप्सामा लोसार अगाडि नै हिउँ परेन भने अनिकाल लाग्छ’ । एकजना शेर्पाले भन्यो । मैले लोप्सा सोधैं । आँखै अगिको अग्लो डाँडो रहेछ ।
यांग्रीको टाउकामा सेतो गुम्बा देखिदै छ । जहाँ रानी राजेश्वरीलाई लगेर राखिएको थियो । आर.के. र मेरो अन्तिम यात्रा त्यहि यांग्री सम्मको हो । यमको टिम मेलम्चीघ्याङ र तरकेघ्यङ हुँदै तलै तल झर्ने छ ।
कुटुमसाङमै हुँदा मेरो दायाँ घुडाको हड्ढी अचानक दुखन थाल्यो । बिहान चिप्लेर लडेको थिए । सायद त्यसकै असर हुनु पर्छ । हिंडुनजेल खासै दुखेको थिएन बसे पछि सहनै नसकिने गरि दुख्यो ।
अचानकको दुखाइले अचानक यात्रा रोकिदियो । आर.के र म अब फर्कने निर्णमा पुग्यौँ । बिस्तारै चनौटे झरेर गाडि चड्ने छौ ।
कुटुमसाङमा दालभातको तीनसय पचास । लु नखाने । बरु तल कतै गाउँम पकउँन लगाएर खाने । हामी यात्राको बीच बाटो बाटै फर्कदै छौ । स्थानियलाई सोधेको चनौटे झर्न तीन घण्टा लाग्छ ।
मेरो घुडो सहनै नसक्ने गरि दुखेको छ । यसतो रोगी यात्रामा रहर गर्ने ?
गाउँ त निकै तल रहेछ । गाउँ भेट्नै तीन घण्टा लाग्यो ।
चनौटे त काहाँ हो काहाँ ?
गाँउ भेटियो तर मान्छे कोहि छैनन् । एउटा पसल भेटियो त्य पनि बन्द । चाउचाउ पनि खान पाइएन । माटै चपाउँ झै गरि भोक लागेको छ । घुडो चल्नै नसक्ने भयो । आर.के.रुख बुटा देखि चुच्चो डुङ्गा सम्मको फोटो खिच्दैछन् ।
तल गाउँको फेदिमा तामाङहरुको घ्यावा रहेछ । सिंगो गाँउ घ्याव खान गएको छ । हामी पनि घ्यावमै पुग्यौँ । एउटाले थालमा दाल, भात, तरकारी र एक गिलास रक्सी ल्याएर दियो । पहिले त नखाउँ जस्तो लागेको थियो । पछि भोक सम्झियौँ र खायौँ । आज सम्म खाएको सबै भन्दा मिठो दाल भात कसको नममा खाइयो थाहा भएन । मर्नेको नम सोध्न विर्से छौँ ।
आर.के.ले कलचर फोटो खिचे र माथि यांग्री तिर हेरे । मैले फरफराई रहेको घ्यावाका तीन रंगे झन्डा हेरें र मृत आत्मलाई श्रद्धानजलि दिएँ ।
फर्कदा आँखाको गति फेरि यांग्रीको टाउकामा पुगेर उभियो । र, पैतलाको गति ओरालै ओरालो खस्यो ।
रमेश सायन सुख्खा भाग्य हिँडेर रेगिस्थान त भेटिएकै थियो यति मै काफ्फि हुनुपर्थ्यो जिन्दगीको अन्तिम सिमाना तर कहाँ कहाँबाट आइप...
अक्षरका उस्ताद डम्मर सर
- रमेश सायन rashayan@hotmail.com त्यो साँझ अक्षरहरुमा टेकेर धुँवा हिड्यो । काभ्राको बोट तिर आउँदै गरेको वसन्त । नबिर्सी फुलेको गुलम...
रमेश साय हाकिम बिहान नौ बजे आफ्ना गुच्चा जसता आँखाहरु टेवलमा रखेर मेरो अनुहारमा भिर दगुरेको देख्छ आगनमा फुलेको शिरिसक...
हिंडेथें । आमाको देशबाट शीतका पाइलाहरु कुल्चँदै कुल्चँदै सपनाको राजमार्ग छिचोल्दै छिचोल्दै आ...
एउटा राजमार्ग सपना
‘गीत र गजल मिडियाले छुट्याउनु र्पछ’ - सुनसरी २५ असोज । नेपाली सञ्चारमाध्यमले गीत र गजललाई नछुट्याइ प्रकाशन र प्रसारण गर्दा सर्वाधिक लोकप्रियतामा रहेपनि गजल विधा उपेक्षामा परेको गजलकारहरुले बत...
शहरमा म - सलोजा ‘सबैभन्दा बढी प्रेम कसलाई गर्छौ ?’ ‘म आफैलाई गर्छु ।’ ‘मलाई ?’ ‘म आफूलाई भन्दा बढी प्रेम कसरी अरुलाई गर्न सक्छु र ?’ ‘तिमी निर्दयी भएको ?’ ‘मैले सत्य...
Ramesh Shayan | Create Your Badge
@सर्वाधिकार रमेश सायन . rashayan@hotmail.com. Powered by Blogger.
अनुभुती कथा कविता निबन्ध यत्रा